Kwindawo yanamhlanje yokuthengisa ekhuphisanayo, izinto ezizezakho zibonelela ngeempawu ezahlukileyo kumlo wokubamba ingqalelo yabathengi. Iinkampani kulo lonke eli shishini zizama ukuhambisa amava angalibalekiyo, amava abathengi okwakha ukuthembeka kwaye ekugqibeleni baphucule ukuthengisa- kodwa kulula ukutsho kunokuba kwenziwe. Ukwenza olu hlobo lwamava kufuna izixhobo zokufunda malunga nabathengi bakho, ukwakha ubudlelwane kunye nokwazi ukuba loluphi uhlobo lwezinto abanokuthi babe nomdla kuzo, kwaye nini. Yintoni ebaluleke ngokulinganayo kukwazi
Me-Commerce kunye neKamva leRhwebo
NgeCawa, Meyi 25, 2014 NgoMgqibelo, ngoMeyi 24, 2014 Douglas Karr
Ukuthengisa kutshintsha ngokukhawuleza-kokubini kwi-Intanethi nakwi-intanethi. Ngokwesiko, iindawo zentengiso zihlala zinemida ephantsi kunye nevolumu ephezulu yokuvelisa iziphumo zeshishini abazifunayo ukuze baphile. Sibona ingeniso ekhawulezileyo kuthengiso kule mihla apho itekhnoloji ikhawulezisa ukukhula kunye nokwandisa ukusebenza ngokukuko. Iindawo zentengiso ezingasebenzisi thuba ziyafa… kodwa abathengisi abasebenzisa itekhnoloji bangabanini beemarike. Ukutshintsha kwenani labantu, uguquko kwezobuchwephesha, kunye nemfuno yabathengi yokwenza izinto zibe zezakho